Ngo-2014: Unyaka wamava abaThengi | Martech Zone
Ndiyathemba ukuba unyaka nonyaka ngunyaka wamava kubathengi kwinkampani nganye, akunjalo? Ndiyazi ukuba ayisiyiyo isihloko ebesibaleka kuso. Kwixesha elidlulileyo benditshilo ukuba inkonzo yabathengi sisiseko secebo lenkampani nganye kwezentlalo. Ngenxa yotyekelo lwendalo lwabathengi lokwabelana kunye nophando ngolwazi kwi-intanethi malunga neemveliso abazisebenzisayo, iinkampani abasebenza nazo kunye neempawu abazithandayo okanye abaphoxekile ngazo, isicwangciso ngasinye senkampani yemithombo yeendaba zentlalo sinokonakaliswa kakhulu okanye siphuculwe yi-echos yamava abathengi kwi-Intanethi.
Njengamaqonga ezentlalo akhula kwaye anda kwi-2014, ikwanjalo nesixa abathethayo abathengi kunye nokwabelana ngaso kwimidiya yoluntu. U-2014 ngokuqinisekileyo ngunyaka wamava abathengi kwaye konke oku kuyongezwa yimithombo yeendaba zentlalo. Kule infographic siza kuxoxa ukuba kutheni ngoku ilixesha lokuba usebenzise ubukrelekrele kwezentlalo ukufezekisa amava abathengi kunye nendlela onokuthi uthathe inyathelo ngayo.
Uguquko luboshwe ngokuthe ngqo kukhetho lweemvakalelo ezenziwa ngumthengi okanye ishishini nje ukuba bathembele ekubeni benze isigqibo sokuthenga. Kuba inkonzo yabathengi yinombolo yoku-1 yokuthembela, ayisiyongqondo yokuba kufuneka ube namava amakhulu kubathengi ukuze ufikelele, ufumane kwaye utsale abathengi kwi-intanethi.
tags: ukubandakanyeka kwabathengiamava kumakhasimendeinjongo yomthengiukunyaniseka kwabathengiInkonzo eyenzelwengenjongonewbrandanalyticsukubandakanyeka kwi-IntanethiAbabuyekezi be-intanethiuluvo olukwi-intanethithemba